tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် P2080 - ရွှေလေဆာ
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: P2080
လေဆာအရင်းအမြစ်: IPG / nLIGHT ဖိုင်ဘာလေဆာမီးစက်
လေဆာပါဝါ: 1000w 1500w 2000w 2500w 3000w 4000w
tube အရှည်: 8 မီလီယံ
ပြွန်အချင်း: 20mm ~ 200mm
CNC controller ကို: ဂျာမဏီ PA ဆိုပြီး
အသိုက် software ကို: စပိန် Lantek
ပစ္စည်း & လျှောက်လွှာ
P2080 Fiber လေဆာ Tube ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
GOLDEN laser - ပြွန်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ပတ်ပတ်လည်စတုရန်းလေးထောင့, စတုဂံ, တြိဂံ, ဘဲဥပုံ, ခါးပြွန်နှင့်အခြားပုံ၏သတ္တုပြွန်များအတွက်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြွန်ပြင်အချင်း 10 မီလီမီတာ ~ 300mm, အရှည်6လ, 8 မီလီယံ, 12M နိုင်ပါတယ်။ ပြွန်အရှည်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ဘက်ပေါင်းစုံအဓိကခန္ဓာကိုယ်ကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ဒေါင်လိုက်နှင့်တိကျအတူတပြင်လုံးကိုစက်စေသည်; dual ရည်ရွယ်ချက်က Chuck မေးရိုးချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲပိုက်အမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။
optimized လက်သည်းကျင်းပနိုင်ရန်ဖိအားပုံပျက်သောမပါဘဲ 1mm အတွင်းပြွန်နံရံအထူစေသည်; ဆန်းသစ်တလမ်းလေကြောင်းထိန်းချုပ်မှုလက်သည်းတင်းကျပ်စွာဆလင်ဒါဘဝတိုးချဲ့ကူညီပေးသည်။
Visual စကေးချိန်ညှိထောက်ခံမှုရုတ်သိမ်း device ကိုအချိန်အစာကျွေးကယ်တင်, အာရုံစူးစိုက်မှုသေချာ, ပိုက် Swing ကာကွယ်ပေးသည်; integrated circuits များ, တင်သောလွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အနိမ့်ပျက်ကွက်မှုနှုန်းထောက်ပံ့ပေးချောမွေ့။
အလိုအလျှောက်အလိုအလျှောက်နယ်နိမိတ်, စင်တာ, အော်တိုလျော်ကြေးငွေကိုရှာဖွေ; ချိန်ညှိအကြိမ်ရေဖောက်ထား; အမြင့်ယုတ်လျော့စေသောအိပ်ရာ, ကောင်းသောမာကျောမှု, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အရှိန်။
စက်နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များဖြတ်တောက်ခြင်း P2080 Tube လေဆာ
မော်ဒယ် number ကို P2080
tube အရှည် 8000mm
ပြွန်အချင်း 20 ~ 200mm
လေဆာအရင်းအမြစ် တင်သွင်းဖိုင်ဘာလေဆာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု IPG / N-အလင်း
Servo motor ကို အားလုံး axial လှုပ်ရှားမှုများကို4servo မော်တာ
လေဆာအရင်းအမြစ်ပါဝါ 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W
ရာထူးတိကျမှန်ကန်မှု ± 0.03mm
ထပ်ခါတလဲလဲအနေအထားကိုတိကျမှန်ကန်မှု ± 0.01mm
အများဆုံးအနေအထားမြန်နှုန်း 100 / မိနစ်
မြန်နှုန်းအလှည့် 120r / မိနစ်
acceleration မြန်နှုန်း 1G
ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း ပစ္စည်းပေါ်တွင်မူတည်သည်, လေဆာအရင်းအမြစ်ပါဝါ
လျှပ်စစ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး AC380V 50 / 60Hz
GOLDEN laser - Fiber laser ဖြတ်တောက်သည့်စနစ်ဆောင်းပါးတွဲ
စမတ် Fiber လေဆာ Tube ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အပြည့်အဝပိတ် Pallet စားပွဲတင် Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းလူပျို Mode ကို Fiber လေဆာသတ္တုစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
ပွင့်လင်း-type အမျိုးအစား Fiber လေဆာသတ္တုစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
Dual-Function Fiber လေဆာစာရွက် & Tube ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အသေးစားအရွယ်အစား Fiber လေဆာသတ္တုစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
စသည်တို့ကိုသတ္တုပရိဘောဂ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေနံတူးဖော်ရေး, display ကိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း, တံတား supporting, သံမဏိရထားလမ်းထိန်သိမ်း, သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာကမီးကိုထိန်းချုပ်နှင့်ပိုက်အပြောင်းအလဲနဲ့
မော်ဒယ်အမှတ်။ : gf-1530T
dual CNC Fiber လေဆာစာရွက်သတ္တုနှင့် Tube / ပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
တဦးတည်း machine ပေါ်တွင်စာရွက်များ၏ပြွန်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးချင်းဖြတ်တောက်ဘို့မရရှိနိုင်ပါ။ ပြွန်အရှည်3မီတာ,4မီလီယံ,6လ, အချင်း 20-300mm ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းစာရွက်အရွယ်အစား 1.5 ×3မီတာ, 1.5 ×4မီလီယံ, 1.5 ×6လ,2×4မီလီယံ,2×6လ
မော်ဒယ်အမှတ်။ : GF-1530 - 700W
ပွင့်လင်းအမျိုးအစား 700W CNC Fiber လေဆာစာရွက်သတ္တုအဘို့အစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
အများဆုံး 10 မီလီမီတာကာဗွန်သံမဏိ, 4mm သံမဏိ, 3mm လူမီနီယံ, 3mm သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ, 3mm ကြေးဝါ, 2mm ကြေးနီဖြတ်တောက်ခြင်း
မော်ဒယ်အမှတ်။ : gf-1530JH
1000W 1500W 2000W 3000W 4000W Fiber လေဆာသတ္တုပြားများအတွက်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
အဆိုပါဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း machine ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်မှုများတစ်ဦးကအမျိုးမျိုး! အမွငျ့ဆုံးသောတည်ငြိမ်ရေးလေဆာပါဝါ 1KW 2KW 3KW 4KW wo ...